Mampirongatra ny asan-jiolahy ao Toamasina… : «Kolikoly avo lenta eo amin’ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana» | NewsMada
Par Taratra sur 13/02/2016
« Vokatry ny kolikoly avo lenta eo amin’ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana ». Izay, araka ny fanakianana nivaivay nataon’ireo depiote vitsivitsy, notarihin’ny filoha lefitry ny Antenimierampirenena, misahana ny faritra Atsinanana, tao amin’ny haino aman-jery, no mampirongatra ny asan-jiolahy, izay efa mila hivadika asa fampihorohoroana mihitsy.
Nikoropaka, nifoha amin’ny torimasony ? Asa, na izay ny anton’ny fivoriana lehibe natao tao amin’ny biraom-paritry ny zandarimariam-pirenena, ao Toamasina, omaly maraina. Fivoriana izay notarihan’ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria, ny jeneraly Paza Didier, ary niantsoana ireo tompon’andraikitry ny fandriampahalemana rehetra, ny Emmo/Reg tany an-toerana. Fa teo ihany koa ny fanambarana miendrika fanakianana nivaivay nataon’ireo depiote vitsivitsy voafidy tao Toamasina I, Toamasina II, Fenoarivo Atsinanana, Brickaville, ary notarihin’ny filoha lefitry ny Antenimerampirenena, miadidy ny faritra Atsinanana, tao amin’ny haino aman-jery tany an-toerana. Tsy nitsitsy fitenenana ireto solombavambahoaka raha nanambara fa antony mampirongatra ny asan-jiolahy nisesisesy, izay efa mila hivadika asa fampihrohororoana mihitsy, ka mampalaza ratsy an’i Toamasina amin’izao fotoana izao, ny « vokatry ny kolikoly avo lenta eo amin’ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana ». Niaraha-nandre tokoa fa saiky voatonontonona matetika ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana tamin’ireo asan-jiolahy nitranga tany Toamasina ireny. Indrindra fa tamin’ireny « Raharaha kidnapping » farany teo ireny. Efa fantatry ny rehetra koa ny fisian’ny mpitsara ambony, izay voarohirohy sy notanana ao anatin’izany.
Hapetraka ny paikady vaovao…
Omaly àry, nidina ifotony tany Toamasina, nanao dinik’asa tamin’ireo tompon’andraikitry ny filaminana (avy amin’ny zandary, ny polisy ary ny miaramila), mivondrona ao amin’ny Emmo/Reg any an-toerana, ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria, ny jeneraly Paza Didier Gerard. Samy nanao tatitra ny asa nataony avy ny telo tonta. Nisy ny fehin-kevitra nivoaka taorian’izay, ary samy nilokaloka hanao izay ho afany sy hanamafy ny ezaka nataony ny tsirairay amin’ny fanamafisana orina ny fandriampahalemana. Hapetraka ny paikady vaovao ho fisorohana, fa indrindra koa amin’ny fisamborana ireo olon-dratsy. Nanambara ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria, ny jeneraly Paza Didier Gerard, fa « hotohizana sy hamafisin’ny mpitandro filaminana ny fivezivezena sy ny fisafoana ireo toerana mafana rehetra, na andro na alina ». Ankoatra izay, voalaza fa hatsangana koa ny andrimasom-pokonolona hifanome tanana amin’izy ireo.
Azo heverina, fa hiverina indray ny fifaninanana (masina) eo amin’ny samy mpitandro filaminana any an-toerana, araka izany. Indrindra, amin’ny fanadihadiana sy fikarohana ireo jiolahy namafy korontana sy nahavanon-doza tany Toamasina farany teo ireny. Nisongadina indrindra tamin’izany, ohatra, ny fahitana ilay fatim-behivavy, voarasarasa sy novonoina tamin’ny fomba feno habibiana, izay tena nahatonga resabe tokoa, tsy tany Toamasina ihany fa saiky nanerana ny Nosy mihitsy.
Mikasika ity farany, fantatra fa voatery nandray andraikitra nandevina azy ny mpiasan’ny kaominina, noho ny mbola tsy fisian’ny fianakaviana naka ny razana tao amin’ny tranom-patin’ny Hopitalibe.
Sajo sy M.R.
Une réponse à "Mampirongatra ny asan-jiolahy ao Toamasina… : «Kolikoly avo lenta eo amin’ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana»"
Rakotondralambo 14/02/2016 à 12:07
Tokony asiana ireny karazana “vigipirate” any ampita ireny eto amintsika , karazana couvre feu moa zany , ka mivezivezy any anelakelantrano mihintsy ny andiana miaramila indrindra fa ny alina.Zay no mba sosokevitra ataoko.